DT2 မော်ကွန်းတိုက်• DT2 • Downtown Dutchtown
အင်္ဂါနေ့တွင်ပေးခြင်း - Dutchtown အကျိုးအမြတ်မယူပါနှင့်
အပေါ် Posted ဒီဇင်ဘာလ 1st, 2020
၂၀၂၀ တွင် Dutchtown မှအမြတ်အစွန်းမရရှိခြင်းသည်မကြုံစဖူးစိန်ခေါ်မှုများနှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီး ၉ လအကြာတွင်ဖြစ်ပွားသောတစ်နိုင်ငံလုံးပျံ့နှံ့ကူးစက်မှုကိုမကြုံစဖူးတုံ့ပြန်မှုများပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အနီးအနားရှိအဖွဲ့အစည်းများသည် Dutchtown နှင့်၎င်း၏နေထိုင်သူများအတွက်ဖြတ်သန်းလာခဲ့ကြသော်လည်းအရင်းအမြစ်များသည်၎င်းတို့၏အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိသည်။ ဤပေးကမ်းမှုအင်္ဂါနေ့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသိုင်းအဝိုင်းအဖွဲ့အစည်းများအားခိုင်မာ။ စည်းလုံးမှုရှိစေရန်သင်တတ်နိုင်သမျှမည်သည့်အထောက်အပံ့ကိုမဆိုသင်တောင်းခံရန်ဖြစ်သည်။
"အင်္ဂါနေ့ပေးခြင်း: Dutchtown အကျိုးအမြတ်မထောက်ပံ့ပါ" ၏ကျန်အပိုင်းများကိုဖတ်ပါ။
အောက်မှာ Filed DT2 . အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ . DT2, ဒိန်းမတ်နှင့် ရန်ပုံငွေရှာ. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ .
ဒီ post ကိုနောက်ဆုံးပေါ် update လုပ်ခဲ့သည် ဒီဇင်ဘာလ 1st, 2020 .